Archive du 20200423
Depiote Alain Ratsimbazafy Midina ifotony manampy ny vahoaka
Tsy mipetra-potsiny akory ny solombavambahoaka avy amin’ny antoko Tiako I Madagasikara amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao fa miezaka midina ifotony manampy ny vahoaka.
Mpanao gazety Vavolombelon'ny tantaram-pirenena
Na ady, na tolona, na aretina, na krizy, na fahavaratra, na ririnina, maraina, atoandro, hariva, alina, dia eo foana ny mpanao gazety. Tena vavolombelon¬'ny tantaram-pirenena.
Vokatra bio Tadiavina be any Eoropa sy Amerika
Lazaina fa tsy ampy fanadihadiana sy tsy ampy fanaporofoana klinika akory ny tambavy COVID organics dia efa ampiasaina sahady ka hanerena olona na mpianatra, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena,
Olona tratra tsy manao arotava Tsy hisy indrafo intsony amin’ny herinandro
Efa maro ireo fepetra noraisina ho fisorohana ny fihanaky ny Coronavirus ho an'ny eto Antananarivo izay tena be marary, teo ny famendrahana fanafody ka nozaraina 4 ny toerana :
ahasitranana amin'ny Coronavirus Nijoro vavolombelona ny pastera Riana
Tsy mbola ny tambavy Covid Organics no nahasitrana ny Pastera Riana Razafintsalama raha ny fijoroana vavolombelona nataony teny Ampandrana omaly.Herinandro notsaboina teny amin'ny hopitaly manarapenitra
Tambavy Covid Organics Tsy terena hisotro ny mpianatra
Nitondra fanazavana mikasika ilay tambavy CVO na covid organics Razafimahefa Herimanana, sekretera jeneraly eo anivon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fanofanana ara-teknika, omaly.
Tambavy Covid Organics Zaraina ho an'ny daholobe an-dalambe
Tsy dia mifanalavitra amin’ireny mividy tambavy na mangidy eny an-dalambe ireny omaly ny mponina teto Antananarivo renivohitra izay nanaiky ho zaraina ilay tambavy fisorohana ny aretina COVID 19
Pr Vololontiana Hanta “Mahakivy ny mahita ireo tsy manaja ny fepetra”
Hatramin’ny omaly hariva, dia mbola eo an-dalam-pitiliana tanteraka ny Institut Pasteur de Madagascar ary andrasana ny tatitra.
Pr Rakoto Fanomezantsoa Efa vita hatry ny ela ny andrana momba ny Artemisia
Misy ny Artemisia annua avy amin’ilay zava-maniry, ary misy ny raokandro izay efa fantatra hatry ny ela fa mampitombo ny hery fiarovan’ny olombelona amin’io zava-maniry io, hoy ny Pr Rakoto Fanomezantsoa Andriamparany Tale Jeneralin’ny Hopitaly Miaramila na ny Homi eny Soavinandriana.